true communication /zu-ZA/tools-for-life/communication/steps/what-is-communication.html read 1 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/communication_zu_ZA.jpg UkuXhumana
Ngabe ukhuluma kanjani nomuntu ukuze omunye umuntu alalele futhi aqonde? Ngabe umlalela kanjani omunye umuntu ukuze azi ukuthi uyathanda futhi ulandela abakushoyo? Futhi, lapho usho okuthile, wazi kanjani ukuthi ngabe uzwakele futhi waqondwa?
Lawa wonke amaphuzu mayelana nokuxhumana angakaze abhekwe kahle futhi achazwe ngaphambili.
Abantu bazi ukuthi ukuxhumana kuyingxenye ebalulekile yempilo, kepha kuze kube manje akekho noyedwa owake wakwazi ukutshela umuntu ngempumelelo ukuthi kufanele axhumane kanjani.
Ngaphambi kwe-Scientology, isihloko sezokuxhumana sasinganikwanga ukubaluleka kwakho okuyikhona noma sifakwe enkambweni engafundwa ukuze kutholwe imiphumela ephelele—ikhono lokuxhumana kahle. Izincwadi eziningi nezindatshana ezabhalwa ngokuxhumana azange zibheke leyo ndaba njengengxenye ebalulekile noma edingekile yempilo noma iveze ukuthi isetshenziswa kanjani ebudlelwaneni nabanye. Bakhuluma ngokuxhumana kungathi yinto eyenziwa ngumshini. Kepha yonke impilo incike ekwazini nasekuqondeni izisekelo, ezibaluleke kakhulu nezokuqala zengxenye yokuxhumana.
Ukuze ukwazi ukuxhumana nomuntu nanoma ubani futhi ukwenze kahle kakhulu, kufanele usiqonde ngokugcwele isifundo.
Kwi-Scientology, incazelo eqondile yokuxhumana isetshenziwe, yahlolwa futhi yafakazelwa isikhathi esingaphezu kwengxenye yekhulu. Kuholele ekuqondeni okujulile kakhulu kwempilo uqobo.
Kunendlela elula kakhulu yokusho ukuthi ukuxhumana kusho ukuthini: ukuxhumana kungukushintsha (noma ukunyakaza) kwenhlayiya ukusuka kwenye ingxenye yesikhala kuya kwenye ingxenye yesikhala. Inhlayiya yinto edluliswayo. Kungaba yinto, umyalezo obhaliwe, igama elikhulunywayo noma umbono.
Isibonelo, uma uthathe i-baseball wayiphonsa kothile ukuthi ayibambe, lokho kungaba ukuxhumana phakathi kwakho kuya komunye umuntu. Uma uthi “sawubona” ​​kothile, lokho nakho kungaba ukuxhumana, kulandela lokho okushiwo ngenhla. Uma othile ekuthumelele i-email, lokho kungaba futhi ukuxhumana.
Ukuthatha lesi sitatimende esilula ngokuxhumana isinyathelo esisodwa ngokuqhubekayo, kukhona ifomula ephelele neqondile (indlela ethile noma inqubo yokwenza noma ukuphumelela entweni ethile) yezokuxhumana eyasetshenzwa ngokucophelela futhi yaqoshwa ngu-L. Ron Hubbard. Kubaluleke kakhulu ukuthi uyazi futhi uqonde iFomula YezokuXhumana ukuze uyisebenzise ngempumelelo.
Ukuze wenze njalo, qala ngokubheka okushiwo amagama alandelayo ukuze uthole ukuqonda okugcwele nangokucacile kokuthi asetshenziswe kanjani kwifomula enikezwe ngezansi.
Imbangela iphuzu lapho okuthile kwenzeka noma kuqala khona. Uma usho okuthile komunye umuntu, uyimbangela.
Ibanga isikhala esikhona phakathi kwamaphoyinti amabili. Isibonelo, ibanga phakathi kwabantu ababili lingaba izinyawo ezimbalwa. Ibanga eliphakathi kwamadolobhana amabili lingaba ngamakhulu amakhilomitha.
Umphumela iphuzu elithola okuthile. Uma usho okuthile komunye umuntu, uyimbangela kanti omunye umuntu ungumphumela. Uma omunye umuntu esho okuthile kuwe, uyimbangela futhi wena uyiphuzu lomphumela.
I-intention umqondo wokuthi uzokwenza okuthile. Isibonelo, uma unenhloso eqinile yokuba ngumculi, yilokho okuholela ekubeni nguye. Kunoma yikuphi ukuxhumana, kufanele ube nenhloso yokuthumela umyalezo kothile ukuze kwenzeke.
Ukunakwa ukwazi okuthile, ukubuka noma ukuqaphela. Uma ubiza othile ngegama lakhe, kuvame ukuthi uthole ukunakwa kwakhe. Ukuxhumana nomunye ngempumelelo, udinga ukuthola ukunakwa kwakhe.
Ukuphindaphinda isenzo sokuphinda noma ukwenza ikhophi yento. Uma ukhuluma nomuntu wesilisa futhi umtshela ngekati bese yena ethola umbono wokuthi ukhuluma ngenja, lokho akuyona into ephindaphindwayo. Uma ekuqonda ukuthi ukhuluma ngekati futhi ethola lowo mbono, unakho ukuphindwaphindwa kwalokho okushoyo. Kunoma yikuphi ukuxhumana, kubalulekile ukuthi omunye umuntu athole ukuphindwaphindwa kwalokho okushoyo.
Ukuqonda kungamandla noma ikhono lokuqonda, okusho ukuba nomqondo osobala futhi ofanele noma ulwazi oluphelele nolunembile lwalokho okushiwo okuthile. Kufanele ulethe ukuqonda kwalokho okushoyo lapho uxhumana.
IFomula YokuXhumana imbangela, ibanga, umphumela, i-intention, ukunakwa nokuphindaphinda ngokuqonda.
Yilokhu kanye okudingeka kwenzeke kunoma yikuphi ukuxhumana ukuze kuphumelele.
Ake sithathe isibonelo saleli formula engxoxweni eyenzeka nje phakathi kwabantu ababili. Indoda ibheka usuku oluhle bese inquma ukutshela unkosikazi wayo, u-Mabel, ukuthi icabanga ukuthi wusuku olukhulu.
Uqala ukuxhumana (uyimbangela) futhi ukhulumela phezulu ngokwanele ukuba umyalezo uhambe usuka emlonyeni wakhe uye ezindlebeni zika-Mabel, ohlala eduze kwakhe (ibanga).
Ufuna ngempela ukwazisa u-Mabel ukuthi ucabanga ukuthi wusuku olukhulu (i-intention). Uqala ukuxhumana ngokusho igama lika-Mabel ukuthola ukunakwa kwakhe (“Wow, Mabel ...”).
Ube esechaza lesisimo asibonayo ukuze athole impinda yalokho akubonayo nangendlela azizwa ngayo (“Usuku oluhle kanjani. Bheka nje lokho kuphuma kwelanga. Kuhle kakhulu!”).
UMabel uthola ukuxhumana, abheke ukuphuma kwelanga athole ukuqonda kwalokho okudluliswayo.
IFomula YokuXhumana ivula umnyango wokuqonda sonke lesihloko.
Ngokwehlisa ukuxhumana ezingxenyeni zakho eziqondile, ungabona ukuthi ingxenye ngayinye ihlangana kanjani futhi ungasiqonda kahle sonke lesi sihloko. Futhi ngokuqonda okwengeziwe, ungathuthukisa noma iyiphi ingxenye yefomula futhi uyisebenzise ukuthuthukisa ukuxhumana kwakho nabanye.